इन्स्योरेन्स शिक्षा:जनरल इन्स्योरेन्स भनेको के हो ? जनरल इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने कारणहरु के-के हुन् ? – Insurance Khabar
इन्स्योरेन्स शिक्षा:जनरल इन्स्योरेन्स भनेको के हो ? जनरल इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने कारणहरु के-के हुन् ?
प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०७५, बिहीबार १०:२८
जीवन र निर्जिबन गरी बीमा दुई प्रकारका हुन्छन् । निर्जिवन बीमामा सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्वको बीमा गरिन्छ भने जीवन बीमामा मानिसको जीवनको बीमा गरिन्छ । जनरल इन्स्योरेन्स अन्तर्गत निम्न बमोजिम बीमा गरिन्छ :